योगेशलाई रोजेको मन्त्रालय !::News from Nepal
नयाँ आर्थिक बर्षको सुरुवात हनै लाग्दा त्तारुढ नेकपामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बहसले प्रवेश पाएको छ । हिजो मात्र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मत्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्ने बताइसेका छन् । सरकारले राम्रो सँग काम गर्न नसकेको आरोप र चौतर्फी दवाव बढिरहेको बेलामा मन्त्रीपरिषदका विषयमा ओली दाहालले भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् । रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा योगश भट्टराई लाई ल्याउँने ओलीको भित्री चाहना रहेको बुझिएको छ । स्रोतको दावी गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराईलाई पर्यटन , संचार या अन्य कुनै विकासे मन्त्रालय रोजेर लिन सन्देश पठाएका छन् । पटक पटक मन्त्री बनाउँने भन्दै फेरी धोका खाँदै आएका भट्टराइको सिंहदरवार प्रवेश यस पटक भने करिब पक्का जस्तै भएको छ । योगेशले पनि पछिल्लो समय ओलीको रक्षाकवज कै भुमिका खेल्दै आएका छन् ।
‘२० असारभित्र एक्सन प्लान ९कार्ययोजना पेस० गर्ने गरी सचिवहरूको टिमले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्भवत प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार उहाँहरूले बढीमा तेस्रो साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुहुनेछ ।’ असारभित्र बजेट पास भएपछि साउन पहिलो साताभित्र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र समीक्षा बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी छ ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम १८ जेठमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्टमन्त्री, मोहम्द इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए । फोरमबाटै डा। सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शेरबहादुर तामाङको राजीनामापछि कानुनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल नियुक्ति तथा मन्त्री अधिकारीको निधन हुँदासहित ५ पटक पुनर्गठन भएको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकको सहयोगमा
एक्कासी के भयो प्रचण्डलाई ?
मद्येशीदलको कार्यालयमा रक्सीले मातेर कुटाकुट! (भिडियो सहित)
तराई डुबे पछि यस्तो आयो विप्लवको गर्जन